Oman: Ny Fahavoazana Taorian’ny Rivodoza Phet · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2017 20:10 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, عربي, Español, English
Namely an'i Oman andro vitsy lasa izay ilay rivodoza tropikaly Phet izay niforona avy any amin'ny Oseana Indianina. Ity no rivodoza lehibe faharoa izay nandalo tao Oman taorian'ny rivodoza Gonu telo taona lasa izay. Tsy toy ny Gonu anefa fa efa vonona tamin'ny fandraisana ny rivodoza tamin'ity indray mitoraka ity i Oman sy ny vahoakany kanefa mbola miaina fahavoazana lehibe ny tanàndehiben ‘i Sur izay nandalovan'i Phet mivantana. Nahatratra ny renivohitra Muscat ny rivodoza, kanefa anarany ihany ny fahavoazana raha atao ny fanoharana .
Nanoratra tatitra tamin'ny antsipiriany ny bilaogera tatitra Undercover Dragon momba ny fiantraikan'ny Phet tao amin'ny firenena, ny fahafatesana, ny fotodrafitrasa, ny fifandraisana, ary eny fa na dia amin'ny famokarana solika sy etona fandrehitra aza :
Na dia maro aza ny loza nitranga noho ny tafiodrivotra dia mbola maro kokoa ny loza nitranga noho ny tsy fitandreman'ny olona sy ny fahalianana ratsy hijery ny lohasahan-driaka mampidi-doza vao niforona. Nisy ny fanehoan-kevitra mahaliana natao tao amin'ny bilaogy Dhofari Gucci mikasika ity lohahevitra ity raha nanapa-kevitra ny Polisin'ny Mpanjaka tao Oman (ROP) mba handray fepetra mikasika ireo rehetra izay mikasa hanandrakandran-javatra tsy am-pisainana taorian'ny krizy:
Azonao jerena ny sary maro taorian'ny fandalovan'i Phet ao amin'ny bilaogin'ny Omanizer, Dhofar Gucci, sy Kishor Cariappa.